04152-31090 Toyota Avalon Camry RAV4 အတွက်ရေစစ်စက် – Professional ကအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ|ကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့
04152-31090 Toyota Avalon Camry RAV4 အတွက်ရေစစ်စက်
FOR Port ကွမ်ကျိုး
OEM ထုတ်လုပ်မှုကြိုဆိုပါတယ်: ထုတ်ကုန်, အထုပ် ...
သင်၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမည် 24 နာရီ.
ပို့ပြီးနောက်, ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါမည်, သင်ထုတ်ကုန်ရသည်အထိ. သင်ကုန်ပစ္စည်းတယ်တဲ့အခါ, သူတို့ကိုစမ်းသပ်ပါ, ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးပါ ဦး, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဖြေရှင်းနိုင်လမ်းကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်.
4,No minimum quantity requirementကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
မေး: What's the MOQ?
မေး: How about the quality of our products?
မေး: Could we supply samples?
ဟုတ်တယ်, we offer free samples, but shipping charges will be paid by buyer.
2.ယေဘူယျအားဖြင့်, goods will be sent around 15-30days.
မေး:What’s our loading port?
ကွမ်ကျိုး,Shenzhen and Ningbo port.
မေး:What’s our shipping ways?